India nwere ike ịkwaga iji kesaa Bitcoin dị ka klas akụ - Cazoo
Mbido » Mbido » India nwere ike ịkwaga iji kesaa Bitcoin dị ka klas akụ
Tag: Klas nke Bitcoin, Klas nke Bitcoin, El Salvador cryptocurrencies, Cryptocurrencies nke India
India, nke gosiputara otutu iro megide cryptocurrencies, enyela ndi komiti a ugbua ka ha nyefee ndi isi ulo oru a n’oge na adighi anya.
Mgbe akụkọ El Salvador gachara iji Bitcoin dị ka ego ego (na-eme ka ọ bụrụ ego zuru oke - onye nzuzu!), Ọbụna na India ndị na-anụ cryptocurrency nwere ike iku ume.
Isi mmalite dị mkpa na-eso ụlọ ọrụ ahụ gwara onye nkwusa ahụ Indian Express na gọọmentị ewepụla na ọnọdụ asị ya na mbụ na ego na ego o yikarịrị ka ọ ga-ekewa Bitcoin dịka akụnụba n'oge na-adịghị anya na India.
Onye na-achịkwa ahịa Nchịkwa na Board of India (SEBI) ga-ahụ maka ụkpụrụ maka ụlọ ọrụ cryptocurrency mgbe emechara Bitcoin ka klas akụ. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe nkiri Indian na mkparịta ụka na Mịnịstrị na-ahụ maka Ego gbasara usoro nke usoro iwu ọhụụ, isi mmalite ụlọ ọrụ na-egosi na otu ndị ọkachamara nke ndị ọrụ mmuta na-amụ okwu ahụ. A ga-ewepụta akwụkwọ iwu cryptocurrency na nzuko omeiwu.
Mmepe na-abịa ụbọchị mgbe Reserve Bank nke India (RBI), na okirikiri gwara ụlọ akụ ka kwụsị izere azụmahịa metụtara mebere tokens na-ekwu maka okirikiri ya gara aga site na 2018, dịka Courtlọikpe Kasị Elu machie ya. RBI Gọvanọ Shakthikanta Das, agbanyeghị, kwughachiri obi abụọ ya.
"Anyị nwere ike ịsị na kọmitii ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ na cryptocurrencies nwere ezigbo nchekwube banyere iwu na iwu nke cryptocurrencies… Ihe edemede ọhụụ ga-anọ na kọmpụta n'oge na-adịghị anya, nke ga-enyocha ọnọdụ izugbe ma were usoro kachasị mma. Obi siri anyị ike na gọọmentị ga-anabata cryptocurrencies na teknụzụ blockchain". Okwu sitere na Ketan Surana, onye isi ego na onye isi, Coinsbit, na onye otu, Internet na Mobile Association of India.
Akwụkwọ akụkọ site Indiatech na-egosi na ndokwa nke India nke Bitcoin dị ka klas ndị ọzọ bara uru bụ ọdịnihu dị oke mma. N'ihi na Okike na-agbanwe agbanwe ego dijitalụ (ọnụahịa na-agbanwe kwa ụbọchị kwa ụbọchị) - akwụkwọ a na - ede - ọ gbagwojuru anya iji ha dịka ngwa ịkwụ ụgwọ. Akwụkwọ ahụ kwadoro ka itinye ego itinye ego na itinye ego cryptocurrency, na-eme ka ha dabere na ụtụ isi uru isi n'okpuru Iwu Inye Ego Income.
Hitesh Malviya, ọkachamara na blockchain na itinye ego crypto, ọ sịrị: “N’uche m, gọọmentị India ga-enyocha ụzọ iji hazie Bitcoin. Echeghị m na India ga-atụle ịnakwere Bitcoin dị ka ego fiat n'ọdịnihu dị nso, n'ihi na ọ ga-emetụta ọnọdụ nke rupee Indian oke. Nakwere Bitcoin dị ka ego ejikọtara ọnụ bụ ezigbo echiche maka mba ndị ahụ na-enweghị ego nke aka ha ma ọ bụ dabere na dollar US ”.
Binance na India: Gọọmentị India ga-atụle iwu nchịkwa cryptocurrency kama mmachibido iwu